Duzce Istanbul လမ်းတွင်ရထားလမ်းများဖောက်ဖျက်မည် - RayHaber
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 81 Duzce, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
အစ္စတန်ဘူလ် sokulecek duzce လမ်း၌ပထမဦးဆုံးအလမ်းရထားသံလမ်း
အစ္စတန်ဘူလ်လမ်း Duzce မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာပြင်ဆင်ထားရန်စတင်နေစီမံကိန်းကိုဖျက်ပစ် Faruk, concise အသစ်သောစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက်ခလုတ်ကိုဖိ။ ပထမဦးဆုံးအသစ်အလမ်းရထားစီမံကိန်းအားဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရဖို့သံလမ်းပေါ်တွင်သုံးလမ်းသွားလမ်းအောက်မှာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ 8 လမ်းပေါ်မှာအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်သည်အထိအောက်တိုဘာလ 22 00 10 နာရီညဉ့်ကိုကနေစတင်: ဤအောက်တိုဘာလ 00 00 နာရီခန့်အင်္ဂါနေ့ညဥ့်သည်။
65 ။ အစိုးရသိပ္ပံ, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးDüzceမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Faruk, concise အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းများအတွက်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် button ကိုဖိလေ၏။
Düzceမြူနီစီပယ်အစ္စတန်ဘူလ် Street မှာအကောင်အထည်ဖော်ခံရဖို့အသစ်သောစီမံကိန်းများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်မော်တော်ယာဉ်အသွားအလာ, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးအသုံးပြုသူများအနှငျ့ပတျသကျသောအသစ်သောစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအလမ်းရထားသံလမ်းကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စDüzceမြူနီစီပယ်ပေါ်တွင်လည်ပတ်အရေးယူမှု, ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်အသွားအလာဘဏ်ခွဲDüzceပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုစာဖြင့်ရေးသားပေးခဲ့သည်။
ဖယ်ရှားခံရဖို့လမ်းသံလမ်းအပေါ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည့်အသစ်သုံးမျိုးစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရေးတို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအလမ်းရထားလမ်းသွား။ "Düzceကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်စည်ပင်ကဗဟိုခြင်းဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ် Street မှာလမ်းကြောင်းကိုတည်းဖြတ်နှင့်လမ်းကတ္တရာအလုပ် 08 / 10 / 2019 နေ့စွဲနှင့်အချိန် 22 00 မှာစတင်ပြုမိပါလိမ့်မည်: လမ်းပေါ်မှာ၏လက်ဝဲဘက်, တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကစာတစ်စောင်အောက်ပါကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်သောစီစဉ်ထားစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုအဘို့ပြုခံရဖို့အလုပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ. ဆောင်းပါးတွေ၏စီးဆင်းမှုကိုဦးတည်ချက် Making 10 / 10 / 2019 00 နေ့စွဲနှင့်အချိန်: ငါတို့သည်လိုအပ်ကြောင်းလေးစားမှုအတွက်လုပ်ခံရရန်ထောက်ပံ့ရေးပိတ်ပစ်သည်အထိ ": မှ 00 (traffic ကိုမှဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် 09 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဥ့်ပယ် 10 / 2019 / 00 နေ့ကအားလုံး 00 ဖြစ်ပါတယ်) ။
Duzce အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားကိုနူးညံ့ခဲ့ 04 / 08 / 2017 Beyoglu အတွက်လူကူးလမ်း, အစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း, နုလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားလေမှုတ်ပါလိမ့်မယ်ကျော်ကြား Istiklal Caddesi ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မြူနီစီပယ်ပေါ်လာတာဟာအရင်၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်မီးရထားစက်ခေါင်းများနှင့်တင်ဒါသီးခြားစီ 1 700 တထောင်သန်းကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်။ Düzceမြို့တော်ဝန် Mehmet Kélé, ကျောင်းသား၏ရဲ့စီမံကိန်းကိုအလုပ်များထဲမှတစ်ခုအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လမ်း pedestrianized လိမ့်မယ်။ အချိန်ကာလသတ်မှတ်လေကြောင်းလမ်း Istiklal Caddesi နုလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားခဲ့ပါတယ်ပေးသွားမှာပါ Open-ဝေဟင်စျေးဝယ်စင်တာသို့ကူးပြောင်းရလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 နှစ်ပေါင်းထံမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုး၏အိပ်မက်,4လမ်းပေါ်ဇူလိုင်လအတွင်းအသွားအလာမှအပိတ် 'ငါဟုလိမ့်မည်ရတု' 'စီမံကိန်း Duzce မြို့တော်ဝန် Mehmet Kéléအကောင်အထည်ဖော်ရန် unimplemented ဆုံးဖြတ်ချက် ... ။
ကတ္တရာ၏ 25 တထောင်တန်ချိန် Bornova ၏လမ်းကြောင်းသို့သွန်းလောင်းပါလိမ့်မည် 23 / 02 / 2015 ကတ္တရာ၏တထောင်တန်ချိန် 25 မှ Bornova လမ်းသွန်းလောင်းလိမ့်မည်: Izmir ရဲ့ Bornova မြူနီစီပယ်, ခရိုင်အတွင်းရှိလမ်းများရှေးဟောင်းသုတေသနမှပြောင်းရွှေ့။ ယိုယွင်းဆိုးရွားလမ်းများ 20 နွေးသောရာသီဥတုနှင့်အတူဦးခေါင်းကနေခြေချောင်းမှရှည်လျားသောကီလိုမီတာစည်ပင်သာယာလမ်းသက်တမ်းတိုးရန်တင်ဒါလမ်းခင်းပူကတ္တရာတန်ချိန်ပြည့်ကြလိမ့်မည် 15 တထောင်သူတို့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ5တထောင်တန်ချိန်ခုနှစ်တွင်သီးခြားနူးညံ့သောအမျိုးမျိုးသောနေရာများပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ Patch ကိုအရှည်4ကီလိုမီတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ Bornova မြူနီစီပယ်, လမ်းကတ္တရာများတွင်အသုံးပြုသည့်တန်ချိန်အထူးလေ့လာမှုကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟု 25 တထောင်စုစုပေါင်း။ ဥက္ကဌ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုစဉ်းစားရန်မြှို့နယ်သင်း၏နိုင်ငံသားများဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအပြင်၌။ ထိုကိစ္စအပေါ်တွေကတော့ရွာတွေကိုရန်လိုအပ်သော ...
Düzce, အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းရထားလမ်းစနစ်ကဖြတ်ကျော်လိမ့်မည်အသွားအလာမှပိတ်ပါသည် 19 / 07 / 2012 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစ္စမေးလ် Bayram Düzceမြူနီစီပယ်လမ်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အသွားအလာပိတ်ထားပြီးနောက်ရထားလမ်းစနစ်များမှအကူးအပြောင်းအဲဒီမှာပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ထိုပွဲကိုခံ, "ကျနော်တို့လမ်းပိတ်ဖို့ရန်သွားကြသည်ခြေလှမ်းတို့ကအဆင့်ပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ အစ္စမေးလ် Bayram, ထိုအလုပ်၏လမျးညှနျခပိတ်ပစ်ခဲ့သည်လျှောက်လွှာတစ်ခုအကဲဖြတ်နှင့်အတူစတင်ကြောင်းအသွားအလာအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းယာဉ်ရပ်နားပိတ်ပင်မှု။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်စီမံကိန်း "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းရထားလမ်း system install လုပ်ခြင်းသည်ယာဉ်အသွားအလာဖို့လမ်းကိုပိတ်ထားလည်းမရှိနှင့် ပတ်သက်. သူ၏မိန့်ခွန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီအမှတ်ရယူခြင်းကိုယ်စားခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့ကားရပ်နားပိတ်ပင်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ယခုငါတို့တစ်ခုတည်းလမ်းသွား applications များမှလက်ျာဘက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်နေကြသည်။ သင်တန်း၏, ဤအရာရှိသမျှတို့ကိုအသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလိုအပ်သည်။ ရထားလမ်းစနစ်များအနာဂတ်လေ့လာမှုများ၏ကြိုတင်မဲအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူကျန်းမာတဲ့တည်းဖြတ်ရေးရဲ့ ...
ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်Düzce Tools များထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်လမ်း 04 / 12 / 2018 1.5 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်လမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးမော်တော်ယာဉ်အသွားအလာမှအပိတ် '' လမ်းသွားလမ်းလာ Project မှ '' အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် ပတ်သက်. ယနေ့နံနက်တစ်ဦးနီးကပ်မှဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးတည်းဖုန်းများDüzceမြို့တော်ဝန်မွန်းသည်စီးတီးယာဉ်အသွားအလာကော်မရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဟောင်းကိုပြန်မူလခဲ့ကွောငျးရှငျးပွခဲ့သနညျးလမျးကြကုန်အံ့, ထိုဘာသာရပ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အများပြည်သူအနေဖြင့်လာမယ့်အသွားအလာမှအဖွင့်အဘို့ဆုံးဖြတ်ချက်အထွတ်အထိပ်ဝယ်လိုအား၏သက်ရောက်မှုကြောင့်အလေးပေးခဲ့ပါတယ်။ လကြာ, မျှော်မှန်းဖွံ့ဖြိုးရေး "ပြည်နယ်ယာဉ်အသွားအလာကော်မရှင်" ဟုအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူတရားဝငျမှတျပုံတငျခဲ့သညျ။ အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့-ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်အသွားအလာမှဆွေးနွေးမှု၏လကြာတည်မြဲမှုနောက်တဖန်ယနေ့နံနက်တစ်ဦးထက်ပိုသောဖုံးလွှမ်းရန်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကျမ်းပိုဒ်မှဖွင့်လှစ်။ ငါတို့သည်တယ်လီဖုန်းDüzceမြို့တော်ဝန် Dursun လအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိဥက္ကဋ္ဌ FROM မှရှင်းပြချက် ...
အဆိုပါလမ်းရထားသံလမ်းDüzceဆိုင်ကယ် Path ကိုပြုခံရဖို့ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် 07 / 08 / 2019 Düzceမြူနီစီပယ်, အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းအဘို့ပြင်ဆင်သောစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်လမ်းရှည်လျားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်ကံကြမ္မာအကြောင်းကိုစပ်စုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစားကားတစ်စီး၏စက်ဘီး၏အသုံးပြုမှုကိုအားပေးအားမြှောက်ရည်ရွယ်လေ့လာမှုတစ်ခုစီမံကိန်းကိုလုပ်ဖို့မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ကိုအသုံးပြုပါ။ သိပ္ပံစက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနှင့်Düzceမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ သူကတိကျခြင်းတာဝန်အင်အားသုံးဘတ်ဂျက်၏အဖွဲ့အစည်းပေးထားခဲ့ချပြီးဆီသို့ရောက် လာ. , ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စည်းကမ်းပထမဆုံးနေ့၏ Farouk ဦးစားပေးအစီအမံများ။ အင်္ဂတေတိကျခြင်းကသမ္မတမှာဖော်ပြထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်မြောက်မြားစွာစီမံကိန်းများအတွက်လက်ကိုင်ပုအစ္စတန်ဘူလ်လမ်း၏ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဘို့ခလုတ်ကိုဖိ။ အဆက်မပြတ်အန်ဂျီအိုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တိုင်ပင်တဲ့သူဧရိယာဈေးရောင်း, နိုင်ငံသားများနှင့်တိကျခြင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတ ...
ယာဉ်အသွားအလာမှဖွင့်လှစ်Düzce Tools များထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်လမ်း
Istiklal Caddesi လေကြောင်းDüzceအတွက်မှုတ်ပါလိမ့်မယ်
Bursa လမ်းရထားလိုင်းကို Tayyareci Mehmet လီလမ်းနှင့်လမ်းကြောင်း၏ရိပ်သာလမ်းSelçukbeyဆိုဒ်များသည်အထိတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်
"အစိမ်းရောင်" ကြမ်းပြင်မှ Istiklal လမ်းရထားမှာလွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား
Bursa ဓါတ်ရထားအတွက်စိတ်အားထက်သန် ... ဓါတ်ရထားပထမဦးစွာသမ္မတနိုင်ငံလမ်းCafé Step
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (359) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)